【 ဆောငျးပါး 】 “အဆငျးမရဲနဲ့နျော” | Opinion Leaders
“ဒကာကွီးစဉျးစားကွညျ့။ဒကာကွီး တရားထိုငျတဲ့အခြိနျမှာ ကမ်မဋ်ဌာနျးအပျေါ အာရုံမိတဲ့အခြိနျကမြားလား၊ တခွားကိုလှငျ့တဲ့အခြိနျကမြားလား”
“လှငျ့တဲ့အခြိနျက မြားပါတယျ ဘုရား”
“လူတဈယောကျက ကိုယျနဲ့ဆနျ့ကငျြပွီဆိုရငျ၊ သူ့အပျေါ ကွညျဖွူဖို့လှယျမလား၊ ဒေါသဖွဈဖို့လှယျမလား”
“အကုသိုလျလုပျဖို့က လှယျတယျ။ကုသိုလျလုပျဖို့က ခကျတယျ။အကုသိုလျလုပျတယျဆိုတာ အောကျကိုဆငျးတာပဲ။ကုသိုလျလုပျတယျဆိုတာက အထကျကိုတကျတာပဲ။ဒီတော့ - အဆငျးလှယျလား၊ အတကျလှယျလား”
“အေး - အဆငျးကလှယျတာ မှနျပမေယျ့၊ ဆငျးရမှာကို ကွောကျသငျ့လား၊ တကျရမှာကို ကွောကျသငျ့လား”
“ဆငျးရမှာကို ကွောကျသငျ့ပါတယျ ဘုရား”
“ဒါဖွငျ့ရငျ - အတကျရဲရမှာလား၊ အဆငျးရဲရမှာလား”
“ဒါပမေယျ့ ဒီနလေူ့တှကေ အတကျရဲနလေား၊ အဆငျးရဲနလေား”
“ဟုတျတယျ ဒကာကွီး။လူမြားစုက အပျေါတကျဖို့ထကျ အောကျဆငျးဖို့ကို ပိုစိတျဝငျစားကွတယျ။ဒါကလညျး သဘာဝကပြါတယျ။အထကျကို တကျရတာက ပငျပနျးတယျ။ခကျခဲတယျ။နှောငျ့နှေးတယျ။အောကျကိုဆငျးရတာက သကျသာတယျ။လှယျကူတယျ။မွနျဆနျတယျလေ”
“ဘုနျးကွီးတို့ ရဟနျးဆိုတာ လူတှအေားလုံးရဲ့ အမွငျ့အမွတျထားပွီး ကိုးကှယျတာကို ခံယူရတဲ့သူတှေ မဟုတျလား”
“ကလေး လူကွီး မရှေး၊ ယောင်ျကြား မိနျးမ မရှေး၊ ဆငျးရဲ ခမျြးသာ မရှေး၊ ကုနျကုနျပွောရရငျ တိုငျးပွညျအုပျခြုပျတဲ့ ရမွေသေ့နငျး ပွညျ့ရှငျဘုရငျမငျး ကိုယျတိုငျတောငျ မာနျကိုခပြွီး ရှိခိုးဦးတငျကွရတယျ မဟုတျလား”
“ဘုနျးကွီး ပွောခငျြတာက၊ အဲဒီလောကျ မွငျ့တဲ့နရောရထားတဲ့ ရဟနျးတှအေနနေဲ့ အပျေါတကျဖို့ မနီးနဘေူးလား”
“ဟုတျတယျ ဒကာကွီး။အလှယျတကူ မဟုတျပမေယျ့ တကယျကွိုးစားမယျဆိုရငျ နီးတော့နီးကပျလာပွီလို့ ဆိုရမယျ။ဒကာ၊ ဒကာမတှရေဲ့ စတေနာ သဒ်ဓါတရားတှကွေောငျ့ ဆှမျး၊ ကှမျး ကိစ်စလညျး မပူရဘူး။ကြောငျးသင်ျခမျးကိစ်စလညျး မပူရဘူး။ဆေးဝါးအာဟာရလညျး မပူရဘူး။တရားဘာဝနာကို အေးအေးဆေးဆေး အားထုတျရုံပဲ ရှိတော့တယျ။ဒါပမေယျ့ အဲဒီလောကျ အစစအရာရာအဆငျပွပွေီး မွငျ့မွတျတဲ့နရောကို ပိုငျဆိုငျထားပမေယျ့ အပျေါကို ဆကျမတကျဘဲ စညျးစိမျရဈပွီး လောကုတ်တရာအတှကျ မကငျြ့ကွံ၊ ကြေးဇူးရှငျ ဒကာ၊ ဒကာမတှရေဲ့ မကျြနှာကိုမကွညျ့ဘဲ တဈကိုယျကောငျးဆနျမယျဆိုရငျ ခွတေဈလှမျးထဲနဲ့ အပါယျငရဲမှာ အဝီစိထိ ဆငျးသှားရလိမျ့မယျ”
“ခှငျ့လှတျပါ ဘုရား။တပညျ့တျော ဉာဏျဗဟုသုတနညျးလို့ ရှငျးပွပေးဖို့ လြှောကျတငျပါရစေ”
“ဘုနျးကွီးတို့ ရဟနျးတှေ သိက်ခာပုဒျ ၂၂၇ ပါး စောငျ့ထိနျးရတာ ဒကာကွီးသိတယျ မဟုတျလား”
“အေး။ အဲဒီသိက်ခာပုဒျတှကေို တဈခုမှကြိုးပေါကျလို့ မဖွဈဘူး။မထိနျးသိမျးနိုငျလို့ ကြိုးပေါကျခဲ့ရငျ ဘုနျးကွီးတို့မှာ အပွဈရှိတယျ။အပွဈ အကွီး၊ အသေးတော့ ရှိတာပေါ့လေ။လိုရငျးပွောရရငျ ဒကာကွီးရယျ၊ အပွဈအကွီးဆုံး သိက်ခာပုဒျလေးပါးရှိတယျ။မမွတျတဲ့ မထေုနျမှုကြူးလှနျတာ၊ သူတဈပါးရဲ့ ပစ်စညျးဥစ်စာ ခိုးယူတာ၊ လူ့အသကျကို သတျတာ၊ ဈာနျမဂျဖိုလျ တရားထူးတှကေို တကယျမရရှိဘဲ ရရှိတယျလို့ လိမျညာပွောတာ။အဲဒီလေးပါးမှာ တဈပါးပါးကို ကြူးလှနျမိတဲ့ ရဟနျးအနနေဲ့ သာသနာတျောမှာ ရဟနျးဘဝနဲ့ နခှေငျ့မရှိတော့ဘူး။ခကျြခငျြးလူဝတျလဲရတယျ။နောကျတဈဖနျလညျး ရဟနျးပွုခှငျ့ မရှိတော့ဘူး။ပါရာဇိက အာပတျသငျ့တယျလို့ ဆိုတယျ။ဘုနျးကွီး (ရဟနျး) တှေ ပါရာဇိက ကတြယျဆိုတာ မွငျ့ရာကနေ နိမျ့ရာကိုကတြာပဲ။အောကျကိုဆငျးတာပဲ။ဘယျလောကျထိအောငျဆငျးလဲ သိလား။အဝီစိထိအောငျ ဆငျးတယျ။သူထိနျးထားတဲ့ သီလ သိက်ခာပုဒျက ဘယျလောကျမွငျ့လိုကျလဲ။ဒီလောကျမွငျ့တဲ့နရောကနေ အဝီစိရောကျအောငျ ဆငျးသှားတယျဆိုတော့၊ အဲဒါ အဆငျးရဲတာပေါ့။မဟုတျဘူးလား”
“ဘုနျးကွီး ဉာဏျမှီသလောကျ ဥပမာပေးရရငျ၊ ဒကာကွီးတို့လို အိမျထောငျဦးစီးတဈယောကျက မိသားစုကို သမာအာဇီဝနညျးနဲ့ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျပွီး လုပျကိုငျကြှေးမှေးနတော မိသားစုအတှကျ အကြိုးမမြားဘူးလား၊ ဒကာကွီးအတှကျရော စိတျမခမျြးသာဘူးလား၊ ကုသိုလျမရဘူးလား။အားလုံးအကြိုးမရှိဘူးလား”
“ဒါဆို ဒကာကွီးက အမွငျ့ကိုတကျနတောလား၊ အောကျကိုဆငျးနတောလား”
“တကယျလို့ ဒကာကွီးက မိသားစုကို သမာအာဇီဝနညျးနဲ့ ရှာဖှမေကြှေးဘဲ ခိုးဝှကျလုယကျတာမြိုး စတဲ့ ဝိသမလောဘနဲ့ ပိုကျဆံရှာတယျဆိုရငျကော။ဒကာကွီးက အမွငျ့တကျနတောဖွဈမလား။အောကျဆငျးနတောဖွဈမလား”
“ဒါဖွငျ့၊ ဒကာကွီးအနနေဲ့ အောကျကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆငျးခငျြလား”
“ရဲရဲဝံ့ဝံ့လညျး မဆငျးခငျြသလို မရဲတရဲလညျး မဆငျးခငျြကွောငျးပါ ဘုရား”
“အောကျကို မဆငျးခငျြရငျ ကုသိုလျလုပျရမှာလား၊ အကုသိုလျလုပျရမှာလား”
“ကိုယျကငျြ့တရား ကောငျးသငျ့လား၊ မကောငျးသငျ့ဘူးလား”
“တဈခဏ သာယာမှုအပျေါ စညျးစိမျယဈပွီး တဈနပျစားအကွံမြိုး ကွံသငျ့လား”
“မဟုတျမမှနျ ပါးစပျစညျးကမျးမရှိဘဲ၊ လေ အလကားရတိုငျး တောမကွောကျ တောငျမကွောကျနဲ့ ပွောခငျြတိုငျး ပွောသငျ့လား”
“ကိုယျလုပျတဲ့အလုပျက အပွဈ ရှိ၊ မရှိ မစဉျးစား သူမြားတှဒေုက်ခရောကျတာကို မိနျ့မိနျ့ကွီးကွညျ့ပွီး ကိုယျလုပျလို့ရတိုငျး တဈဇှတျထိုးလုပျလို့ သငျ့တျောပါ့မလား”
“အဆငျးမရဲဖို့ သတိထားနျော ဒကာကွီး”
“မှနျပါ့ဘုရား။တပညျ့တျော သတိထားပါ့မယျ ဘုရား”
ပေါငျမွို့နယျတှငျ Video ကား တဈကား သှားရိုကျစဉျက ဘနျ့ဘှေးကုနျးရှာကြောငျးမှ ကြောငျးထိုငျဆရာတျောက ဆုံးမစကားဆိုခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။သူငယျခငျြး ဒါရိုကျတာက သူရိုကျကူးမညျ့ Video ကားအတှကျ ဇာတျညှနျးရေးပေးရနျ ပွောသဖွငျ့ ရေးပေးရငျး နယျရိုကျကှငျးအထိလိုကျပါသှားခဲ့သညျ။ ဇာတျလမျးက ရှာတဈရှာတှငျ ငါးပါးသီလကို လှနျလှနျကြူးကြူး ခြိုးဖကျြကာ ဒုစရိုကျမှုကြူးလှနျသူမြား နောကျဆုံးတှငျ မိုးကွိုးအပဈခံရ၍ ဘဝနိဂုံးခြုပျသှားရပုံကို တငျပွထားခွငျး ဖွဈသညျ။
ကိုယျကငျြ့သီလ ထိနျးသိမျးနိုငျအောငျ သတိပေးသော ဇာတျလမျးလညျးဖွဈ၊ တညျးခိုသညျ့နရောကလညျး ဘုနျးတျောကွီးကြောငျး ဖွဈနသေဖွငျ့ ဘာသာရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ မရှငျးလငျးသညျမြားကို ဆရာတေျာ့ထံ မေးမွနျးလြှောကျထားရငျး ဆရာတျောနှငျ့ စကားမကွာခဏပွောဖွဈခဲ့သညျ။ထိုမကွာခဏကွားနာခဲ့ရသော တရားမြားမှ အကုသိုလျကို ရဲရဲတငျးတငျး ပွုနသေူမြားသညျ အပါယျလေးဘုံသို့ ပြျောပြျောမှမှေ့ေ့ ဆငျးနကွေခွငျးဖွဈကွောငျး၊ ထိုအပါယျဘုံ အောကျလမျးသို့ အဆငျးမရဲဖို့ အမှာတရားလေးကိုတော့ တဈသကျတာမမနေို့ငျအောငျ အမှတျတရ ရှိဖွဈပါသညျ။
ဆရာတျော၏ သတိပေးတရားနာပွီး နောကျပိုငျးတှငျ အကုသိုလျတဈခုခုကို ပွုမိတိုငျး၊ ပွောမိတိုငျး၊ ကွံစညျမိတိုငျး ‘ငါ အပါယျလမျးကို ဆငျးနပေါလား၊ ဆငျးဖို့ကွံနပေါလား’ ဟု မှတျမှတျရရရှိရငျး ဆရာတေျာ့ကို ကြေးဇူးတငျ၍ ကနျတော့မိပါသညျ။သတိထားသညျ့ကွားမှ မကွာခဏဆိုသလို မှားမိနသေေး၍လညျး ဆရာတေျာ့ကို တောငျးပနျဝနျခြ၍ ကနျတော့မိပွနျပါသညျ။
ပုထုဇဉျလူသားမြားဖွဈ၍ အမှားကငျးဖို့ရနျ မလှယျကူလှပါ။သို့သျောလညျး ထိုအမှားသညျ သိပျကွီးသှား၍တော့ မသငျ့လြျောဟု ထငျပါသညျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ ကိုယျ့ဆန်ဒအရ ကိုယျ့ပိုကျဆံနှငျ့ကိုယျ အရကျသောကျပွီး မူးသျောလညျး မှားပါသညျ။အပွဈရှိပါသညျ။မိသားစုမကျြနှာမကွညျ့ဘဲ အခြိနျပွညျ့မူးနလြှေငျ ပို၍မှားပါသညျ။ပို၍အပွဈရှိပါသညျ။အကယျ၍ အရကျမူးပွီး သူတဈပါး၏ပစ်စညျး ခိုးဝှကျလုယကျခွငျး၊ လူသတျမှုကြူးလှနျခွငျး၊ သူမြားသားသမီး ဇနီးမယားတို့ကို ကာမကြူးကြျောခွငျးတို့ ပွုလြှငျတော့ အမှားကွီးပါပွီ။အပွဈကွီးပါပွီ။
တခြို့က အကုသိုလျ ဒုစရိုကျမှုကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သာသာယာယာ ကြူးလှနျတတျကွ၏။သူတို့ကိုယျတိုငျကလှဲ၍ ဘယျသူ့ဘဝ၊ ဘယျသူ့အသကျကိုမှ ကိုယျခငျြးစာစိတျနှငျ့ မတှေးပေးတတျကွ။
ကြှနျတျော ငယျစဉျက ကွညျ့ခဲ့ဖူးသော ဇာတျပှဲတဈခု၏ ပွဇာတျမှ လူဆိုးလုပျသူကို သတိရမိပါသညျ။သူသညျ တောတှငျးဓါးပွဗိုလျတဈယောကျ ဖွဈသညျ။ခှနျအားဗလကောငျးသညျ။အတိုကျအခိုကျ ကြှမျးကငျြသညျ။ဓားပဈ၊ သနေတျပဈ လကျဖွောငျ့သညျ။လကျမွနျခွမွေနျရှိသညျ။သို့သျော အလှနျရကျစကျ ကွမျးကွုတျသညျ။ရှာတှကေို ဓါးပွတိုကျသညျ။သူ့ကိုဆနျ့ကငျြသညျ့သူ၊ သူကွညျ့၍မရသညျ့သူမြားကို ခကျြခငျြးသတျပဈသညျ။မိနျးကလေး ခြောခြောလှလှ မွငျလြှငျလညျး ငယျသညျ၊ ကွီးသညျ၊ ပြိုသညျ၊ အိုသညျ မရှေးဘဲ အဓမ်မသိမျးပိုကျသညျ။
ထိုမိနျးကလေးမြားက သူ့ကို အပွုံးနှငျ့ဆကျဆံရသညျ။သူ့ကိုခဈြလားဟု မေးလြှငျ ခဈြသညျဟု ပွနျုပွောရသညျ။သူနှငျ့နရေတာ ပြျောလားဟုမေးလြှငျ ပြျောပါတယျဟု ပွနျဖွရေသညျ။သူက ထိုမိနျးကလေးကို ရိုကျနှကျသညျ့အခါတှငျလညျး သူက နာလားဟုမေးလြှငျ မနာပါဘူးဟု ပွနျဖွရေသညျ။
သူ့ကို ဆကျကွေးပေးနရေသော ရှာသူ၊ ရှာသားမြားဆိုလြှငျ သူ့ကို နာကညျြးမုနျးတီးလှနျး၍ သူ့ကှယျရာတှငျ တိရစ်ဆာနျနှငျ့နှိုငျးကာ ဆဲရေးတိုငျးထှာကွ၏။မကွားဝံ့မနာသာ စကားလုံးမြားနှငျ့ ကြိနျဆဲကွ၏။သို့သျော သူနှငျ့တှသေ့ောအခါတှငျမူ တုပျတုပျမြှ မလှုပျရဲကွရှာပေ။ရှာသူ၊ ရှာသားမြားကို အခွားရှာမှ သူခိုး ဓားပွမြား လာရောကျမနှိပျစကျရအောငျ သူက ကာကှယျပေးနတောကို သိတယျမဟုတျလားဟုမေးလြှငျ သိပါတယျဟု ဖွရေသညျ။သူ့ကို ကြေးဇူးတငျလားဟုမေးလြှငျ တငျပါတယျဟု အမွနျဆုံးပွနျဖွရေသညျ။သူ့အလိုကို ဆနျ့ကငျြဖွရေနျ မဆိုထားနှငျ့ သူ့အလိုကအြတိုငျး ထောကျခံဖွပေေးနသေညျက တုနျ့တုနျ့ဆိုငျးဆိုငျး ဖွဈနလြှေငျ သို့မဟုတျ တုနျ့တုနျ့ဆိုငျးဆိုငျး ဖွဈနသေညျဟု သူယူဆလြှငျ ခကျြခငျြး သနေတျနှငျ့ ပဈသတျသညျ။လူထုပိုငျသော ရှေ၊ ငှေ၊ ပစ်စညျးမြားကို အဓမ်မယူရာ၌ သူ့အိတျကပျထဲမှ ပိုကျဆံကို အလှယျတကူ နှိုကျယူသလို သဘောထား၏။လူသတျသညျ့ နရောတှငျလညျး ပုရှကျဆိတျတဈကောငျကို လကျနှငျ့ဖိသတျတာထကျပငျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လှယျလှယျကူကူ ကြူးလှနျနိုငျစှမျးရှိလှ၏။
သူ့လကျအောကျငယျသားမြားကိုလညျး သူ့ကို ပွနျမလှနျနိုငျအောငျ လုပျထားသညျ။သူ့သွဇာအာဏာ တညျမွဲနိုငျရနျအတှကျ လကျအောကျငယျသားမြားကို ပငျပငျပနျးပနျး လကေ့ငျြ့စသေညျ။သူအလိုမကသြူကို ရကျရကျစကျစကျ အပွဈပေးသညျ။လကျညှိုးဖွတျတာမြိုး၊ အခငျြးခငျြးပွနျသတျခိုငျးတာမြိုး လုပျသညျ။သူ့ငယျသားအားလုံးက သူ့ကို လုံးဝမော့မကွညျ့ရဲကွပေ။
ထိုလူဆိုးလုပျသညျ့သူက သရုပျဆောငျကောငျးလှနျးတော့ ပှဲကွညျ့ပရိတျသတျမြားက သူ့ကို ဆီးစမြေ့ား၊ ပွောငျးဖူးရိုးမြားနှငျ့ ပဈပေါကျကွပါသညျ။ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ လကျထဲ၌ အဆငျသငျ့ရှိနသေော စားပငျမစားရသေးသော အပျေါအဖတျမြားပငျ မခှာရသေးသော ပွောငျးဖူးအကောငျးကွီးကို မနှမွောနိုငျဘဲ ပဈပေါကျခဲ့ပါသညျ။
နှဈပေါငျးမြားစှာကွာပွီ ဖွဈသျောလညျး ထိုသူနှိပျစကျပုံမြားကို ယနတေို့ငျ မွငျယောငျပါသေးသညျ။
တဈကိုယျကောငျးဆနျ၍ တခွားသူတှအေပျေါ လောဘတကွီး၊ ဒေါသတကွီး ပွုမူဆကျဆံသူမြားကိုမွငျတိုငျး ထိုလူဆိုးကို မွငျမိပါသညျ။ထိုလူဆိုးနှငျ့ နှိုငျးယှဉျကွညျ့မိပါသညျ။
တခြို့လူမြားသညျ ကိုယျခငျြးစာစိတျမထားဘဲ ငှအေငျအား၊ လူအငျအား၊ လကျနကျအငျအား၊ အာဏာအငျအားတို့ကို အရငျးအနှီးပွု၍ ဝိသမလောဘကို ဦးစားပေးကာ တခွားသူမြား၏ ဘဝတှကေို စိတျကွိုကျခွယျလှယျကွသညျ။သူတို့ကတော့ ဂုဏျယူဝငျ့ကွှား ပီတိတှခေံစားပွီး အကနြေပျကွီး ကနြေပျနကွေလသေညျ။ကလေးငယျလေးတှကေ ငါးသေးသေးလေးတှေ၊ ဖားသေးသေးလေးတှလေို အကောငျငယျလေးမြားကို ဆော့ကစားရငျး ပြျောနကွေသလိုမြိုး ကနြေပျနကွေသညျ။သူတို့၏ အောကျတနျးကသြော စိတျဓာတျမြားကို ပွုပွငျရကောငျးမှနျးမသိဘဲ သူတို့နှငျ့နီးစပျရာ သူတို့သားသမီး သူတို့အမြိုး၊ သူတို့တပညျ့မြားကိုပငျ မကောငျးသော အမှအေနှဈမြား လကျဆငျ့ကမျး ပေးလိုကျကွသေးသညျ။သူတို့ကိုယျသူတို့ အပျေါစီးရောကျနပွေီ၊ သူရဲကောငျးတှဖွေဈပွီဟု အထငျရောကျနတေတျ၏။
တကယျတော့ သူတို့တှသေညျ လူမြား၏ အထငျသေးခံနရေပွီး သရေငျ အပါယျသှားရမှာပါလားဟု မတှေးမိကွ။ကိုယျ့သဘောနှငျ့ကိုယျ၊ ကိုယျ့လောဘနှငျ့ကိုယျ အောကျသို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆငျးနတောပါလားဟု သဘောမပေါကျကွပေ။သူတို့တဈကိုယျလုံးမှာ တောကျလောငျနသေညျ့ ရာဂမီးသညျ အဝီစိမှာရှိသော ငရဲမီးထကျပငျ ပို၍ပူပွငျးနဟေနျရှိပါသညျ။ကိုယျခငျြးစာ အကွငျနာစမျးရကေတော့ သူတို့နှလုံးသားမှာ တဈစကျတဈပေါကျမြှပငျ ရှိဟနျမတူပါ။ထို့ကွောငျ့လညျး ငရဲမကွောကျ ပွာပူမကွောကျ ရဲရဲတောကျ လူမိုကျကွီးတှေ လုပျနတောဖွဈမှာပါ။သူတို့ ဦးနှောကျထဲမှာ တရားခွငျး၊ မတရားခွငျးကို ဆငျခွငျနိုငျရနျ အသိလညျးမရှိတော့ပါ။သတိလညျးမရှိတော့ပါ။
ပုပျပှနသေော လူသကေောငျ၊ တိရစ်ဆာနျအသကေောငျတှကေို မကျမကျမောမော စားသောကျလိုကျ၊ အခငျြးခငျြး စားမာနျခုတျလိုကျနှငျ့ ပှဲတျောကွီးကငျြးပနသေော လောကျကောငျမြား၊ ကြီးကနျးမြား၊ ဠငျးတမြားကို နမူနာအဖွဈကွညျ့ပါ။ဘေးကကွညျ့နသေောသူမြားအတှကျ အော့နှလုံးနာစရာ မွငျကှငျးပါ။အောကျတနျးကသြော အစားအသောကျမြားကို အာဟာရပွုနကွေတာပါ။သို့သျောလညျး သူတို့အတှကျကတော့ နတျသုဒ်ဓါဟု ထငျမှတျမှားနကွေတာပါ။
အကုသိုလျ မကွောကျသော လူတဈစုသညျလညျး မိမိတို့၏ မတျောလောဘနှငျ့ ဖနျတီးထားသော စညျးစိမျနှငျ့ အာဏာအပျေါ သာယာနပွေီး အမှနျတရားကို စိနျချေါရငျး၊ လူကောငျးတှကေို ဒုက်ခပေးရငျး မကောငျးမှုနှံထဲသို့ နကျသညျထကျနကျအောငျ ဆငျးနကွေရှာသညျ။ထိုသူတို့သညျ မိမိပွုသမြှတို့သညျ တရားသဖွငျ့လား၊ မတရားသဖွငျ့လား မိမိတို့ကိုယျတိုငျလညျး ထိုးထှငျးမသိ၊ ဘေးမှထောကျပွလညျးမသိ၊ ဘုရား တရားတျောတှေ ဖတျနေ နာနလေကျြနဲ့လညျးမသိနှငျ့ အတျောလေးကို အံ့သွစရာကောငျးနသေညျ။
သိသလိုလိုရှိသောသူ ကပြွနျတော့ ပိုငျဆိုငျထားသောပစ်စညျးကို လကျလှတျရမှာစိုးသညျ။အရှိနျကောငျးကောငျးရနသေော ဝငျငှတှေေ ရပျတနျ့မှာစိုးသညျ။သညျတော့ ပိုငျဆိုငျထားသောပစ်စညျးကို ဘာလို့လကျလှတျရမှာလဲ၊ အရှိနျကောငျးနတေဲ့ ဝငျငှကေို ဘာလို့ဆကျမရှာရမှာလဲဟု မာနျတကျလာသညျ။“သိက်ခာအကတြော့ မခံဘူး သူမြားအပျေါ ဒုက်ခပေးထားတဲ့ အကွှေးတှကေို နောကျဘဝမှပဲ ဆပျတော့မယျ။တရားသညျဖွဈစေ၊ မတရားသညျဖွဈစေ ငါရှာထားတဲ့ပိုကျဆံ ငါ့ပိုကျဆံပဲ။ငါဖနျတီးထားတဲ့အာဏာ ငါ့အာဏာပဲ။ဘယျသူဘာပွောပွော လုံးဝနောကျမဆုတျဘူး” ဟု လောဘ ၏အပျေါ မာနက ထပျဆငျ့မိကွပွနျသညျ။မကောငျးမှုအပျေါ သာယာပွီး အမှားကို ပွနျမပွငျသညျ့ မွှတေဈကောငျ၏ မာနကို ငါးရာ့ငါးဆယျလာ ဝိသဝန်တဇာတျတှငျ တှရေ့ပါသညျ။
ထိုဇာတျတှငျ ဘုရားလောငျးသညျ အဆိပျကိုဖွစေတေတျသော ဆေးဆရာဖွဈ၏။တဈခုသောရှာမှာ လူတဈယောကျ မွှကေိုကျခံရ၍ မမြေ့ောနရှော၏။ဆေးဆရာကိုပငျ့၍ လိုကျသှားပွီး ကုသသောအခါ ကိုကျသှားသော မွှကေိုယျတိုငျ အဆိပျကိုပွနျစုပျယူနိုငျပါက ခကျြခငျြးသကျသာနိုငျသညျကို ဆေးဆရာက သိ၏။ထိုမွှသေညျလညျး ဝေးဝေးမရောကျနိုငျသေးကွောငျး စဉျးစားမိသညျ။ထို့ကွောငျ့ မွှကေိုလိုကျရှာသောအခါ သူထငျသညျ့အတိုငျးပငျ အနီးအနား၌ တှရေ့သဖွငျ့ ဖမျးပွီး မွှဆေိပျသငျ့နသေော လူနာထံသို့ ယူလာကာ၊ ၎င်းငျး၏အဆိပျမြားကို ပွနျလညျစုပျယူစသေညျ။သို့သျော ထိုမွှကေ၊ အဆိပျမြားကို လုံးဝမစုပျယူပေ။ဆေးဆရာက မညျသို့ပွောပွော၊ ၎င်းငျးက လုံးဝအလြှော့မပေးပါ။နောကျဆုံးတှငျ၊ ဆေးဆရာက ၎င်းငျးကို မီးဖွငျ့တိုကျမညျဟုပွောကာ တကယျပငျ မီးရှို့မညျ့ဟနျနှငျ့ မီးဖို ဖို၏။ဘယျလိုခွောကျခွောကျ၊ ဘယျလိုခြော့ခြော့ ထိုမွှကေ လုံးဝမတုနျလှုပျပါ။သူမြားအသကျတှေ၊ ဘဝတှေ ပကျြစီးတာ မပကျြစီးတာကို သူလုံးဝမစဉျးစားပေးနိုငျကွောငျး၊ သူ့အသကျသခေငျြ သပေါစေ၊ သိက်ခာအကခြံပွီး အဆိပျပွနျစုပျယူပေးဖို့ လုံးဝလကျမခံနိုငျကွောငျးကိုသာ ပွနျပွောလေ၏။
ဘုရားလောငျး ဆေးဆရာက ၎င်းငျးမွှကေို တကယျမသတျခဲ့ပါ။သို့သျောလညျး မသိမှု၏ ဆိုးဝါးပုံ၊ ကွောကျစရာကောငျးပုံကိုတော့ တရားရလိုကျပါသညျ။
တခြို့တခြို့သော လူမိုကျမြားသညျ မိမိတို့၏မာနကို မခြိုးနှိမျဘဲ၊ မိမိတို့၏သိက်ခာကို မခဘြဲ မိုကျလကျစနှငျ့ ဆကျမိုကျကွသညျ။မိမိ၏ တဈခဏစံ ဘဝအတှကျ အကုသိုလျ တှငျးနကျနကျကို ကိုယျတိုငျတူးကာ ဆကျ၍ဆငျးနကွေလသေညျ။
လောကမှာ အဆုံးထိ မတှနျ့မဆုတျဘဲ အခွားသူမြား၏ ဘဝတှကေို ဖကျြဆီးသညျ့သူမြိုးက လူနညျးစုသာရှိပါသညျ။ထိုလူနညျးစုသညျ သာမနျမိသားစုမှာဆိုလြှငျ သူတို့မိသားစုပဲ ဒုက်ခရောကျမှာပါ။အကယျ၍မြား ထိုလူနညျးစုသညျ နိုငျငံတဈနိုငျငံကို အုပျခြုပျသော ခေါငျးဆောငျမြား ဖွဈခဲ့လြှငျတော့ နိုငျငံသားအားလုံး ခံစားရမညျ့ ဒုက်ခစကျဝနျးက တှေးရဲစရာပငျမရှိပါ။သံသရာမှာ ပွနျလညျပေးဆပျရမညျ့ ထိုခေါငျးဆောငျဆိုးမြား၏ ကံကွမ်မာကလညျး အဆုံးမရှိအောငျ ဆိုးဝါးမှာ သခြောပါသညျ။
ထိုသို့ ဂိတျဆုံးအောငျ ဆိုးသူမြားလညျး ဂိတျမဆုံးသေးသဖွငျ့ ပွငျဆငျရနျ အခြိနျရှိပါသေးသညျ။ထို့ကွောငျ့ ဒုက်ခပေးသူတှရေော၊ ဒုက်ခအပေးခံရသူတှပေါ၊ အားလုံး အားလုံး ကိုယျတိုငျလညျး အကုသိုလျမဖွဈ၊ တခွားသူတှလေညျး ဒုက်ခမမြားရအောငျ......။
Just don’t dare to get down. အဆငျးမရဲကွနဲ့နျော။
စကျတငျဘာ - ၄
“ဒကာကြီးစဉ်းစားကြည့်။ဒကာကြီး တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းအပေါ် အာရုံမိတဲ့အချိန်ကများလား၊ တခြားကိုလွင့်တဲ့အချိန်ကများလား”
“လွင့်တဲ့အချိန်က များပါတယ် ဘုရား”
“လူတစ်ယောက်က ကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီဆိုရင်၊ သူ့အပေါ် ကြည်ဖြူဖို့လွယ်မလား၊ ဒေါသဖြစ်ဖို့လွယ်မလား”
“အကုသိုလ်လုပ်ဖို့က လွယ်တယ်။ကုသိုလ်လုပ်ဖို့က ခက်တယ်။အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာ အောက်ကိုဆင်းတာပဲ။ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာက အထက်ကိုတက်တာပဲ။ဒီတော့ - အဆင်းလွယ်လား၊ အတက်လွယ်လား”
“အေး - အဆင်းကလွယ်တာ မှန်ပေမယ့်၊ ဆင်းရမှာကို ကြောက်သင့်လား၊ တက်ရမှာကို ကြောက်သင့်လား”
“ဆင်းရမှာကို ကြောက်သင့်ပါတယ် ဘုရား”
“ဒါဖြင့်ရင် - အတက်ရဲရမှာလား၊ အဆင်းရဲရမှာလား”
“ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လူတွေက အတက်ရဲနေလား၊ အဆင်းရဲနေလား”
“ဟုတ်တယ် ဒကာကြီး။လူများစုက အပေါ်တက်ဖို့ထက် အောက်ဆင်းဖို့ကို ပိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဒါကလည်း သဘာဝကျပါတယ်။အထက်ကို တက်ရတာက ပင်ပန်းတယ်။ခက်ခဲတယ်။နှောင့်နှေးတယ်။အောက်ကိုဆင်းရတာက သက်သာတယ်။လွယ်ကူတယ်။မြန်ဆန်တယ်လေ”
“ဘုန်းကြီးတို့ ရဟန်းဆိုတာ လူတွေအားလုံးရဲ့ အမြင့်အမြတ်ထားပြီး ကိုးကွယ်တာကို ခံယူရတဲ့သူတွေ မဟုတ်လား”
“ကလေး လူကြီး မရွေး၊ ယောင်္ကျား မိန်းမ မရွေး၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ မရွေး၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ ရေမြေ့သနင်း ပြည့်ရှင်ဘုရင်မင်း ကိုယ်တိုင်တောင် မာန်ကိုချပြီး ရှိခိုးဦးတင်ကြရတယ် မဟုတ်လား”
“ဘုန်းကြီး ပြောချင်တာက၊ အဲဒီလောက် မြင့်တဲ့နေရာရထားတဲ့ ရဟန်းတွေအနေနဲ့ အပေါ်တက်ဖို့ မနီးနေဘူးလား”
“ဟုတ်တယ် ဒကာကြီး။အလွယ်တကူ မဟုတ်ပေမယ့် တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် နီးတော့နီးကပ်လာပြီလို့ ဆိုရမယ်။ဒကာ၊ ဒကာမတွေရဲ့ စေတနာ သဒ္ဓါတရားတွေကြောင့် ဆွမ်း၊ ကွမ်း ကိစ္စလည်း မပူရဘူး။ကျောင်းသင်္ခမ်းကိစ္စလည်း မပူရဘူး။ဆေးဝါးအာဟာရလည်း မပူရဘူး။တရားဘာဝနာကို အေးအေးဆေးဆေး အားထုတ်ရုံပဲ ရှိတော့တယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက် အစစအရာရာအဆင်ပြေပြီး မြင့်မြတ်တဲ့နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် အပေါ်ကို ဆက်မတက်ဘဲ စည်းစိမ်ရစ်ပြီး လောကုတ္တရာအတွက် မကျင့်ကြံ၊ ကျေးဇူးရှင် ဒကာ၊ ဒကာမတွေရဲ့ မျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မယ်ဆိုရင် ခြေတစ်လှမ်းထဲနဲ့ အပါယ်ငရဲမှာ အဝီစိထိ ဆင်းသွားရလိမ့်မယ်”
“ခွင့်လွှတ်ပါ ဘုရား။တပည့်တော် ဉာဏ်ဗဟုသုတနည်းလို့ ရှင်းပြပေးဖို့ လျှောက်တင်ပါရစေ”
“ဘုန်းကြီးတို့ ရဟန်းတွေ သိက္ခာပုဒ် ၂၂၇ ပါး စောင့်ထိန်းရတာ ဒကာကြီးသိတယ် မဟုတ်လား”
“အေး။ အဲဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကို တစ်ခုမှကျိုးပေါက်လို့ မဖြစ်ဘူး။မထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ ကျိုးပေါက်ခဲ့ရင် ဘုန်းကြီးတို့မှာ အပြစ်ရှိတယ်။အပြစ် အကြီး၊ အသေးတော့ ရှိတာပေါ့လေ။လိုရင်းပြောရရင် ဒကာကြီးရယ်၊ အပြစ်အကြီးဆုံး သိက္ခာပုဒ်လေးပါးရှိတယ်။မမြတ်တဲ့ မေထုန်မှုကျူးလွန်တာ၊ သူတစ်ပါးရဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ ခိုးယူတာ၊ လူ့အသက်ကို သတ်တာ၊ ဈာန်မဂ်ဖိုလ် တရားထူးတွေကို တကယ်မရရှိဘဲ ရရှိတယ်လို့ လိမ်ညာပြောတာ။အဲဒီလေးပါးမှာ တစ်ပါးပါးကို ကျူးလွန်မိတဲ့ ရဟန်းအနေနဲ့ သာသနာတော်မှာ ရဟန်းဘဝနဲ့ နေခွင့်မရှိတော့ဘူး။ချက်ချင်းလူဝတ်လဲရတယ်။နောက်တစ်ဖန်လည်း ရဟန်းပြုခွင့် မရှိတော့ဘူး။ပါရာဇိက အာပတ်သင့်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ဘုန်းကြီး (ရဟန်း) တွေ ပါရာဇိက ကျတယ်ဆိုတာ မြင့်ရာကနေ နိမ့်ရာကိုကျတာပဲ။အောက်ကိုဆင်းတာပဲ။ဘယ်လောက်ထိအောင်ဆင်းလဲ သိလား။အဝီစိထိအောင် ဆင်းတယ်။သူထိန်းထားတဲ့ သီလ သိက္ခာပုဒ်က ဘယ်လောက်မြင့်လိုက်လဲ။ဒီလောက်မြင့်တဲ့နေရာကနေ အဝီစိရောက်အောင် ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့၊ အဲဒါ အဆင်းရဲတာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား”
“ဘုန်းကြီး ဉာဏ်မှီသလောက် ဥပမာပေးရရင်၊ ဒကာကြီးတို့လို အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်က မိသားစုကို သမာအာဇီဝနည်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး လုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးနေတာ မိသားစုအတွက် အကျိုးမများဘူးလား၊ ဒကာကြီးအတွက်ရော စိတ်မချမ်းသာဘူးလား၊ ကုသိုလ်မရဘူးလား။အားလုံးအကျိုးမရှိဘူးလား”
“ဒါဆို ဒကာကြီးက အမြင့်ကိုတက်နေတာလား၊ အောက်ကိုဆင်းနေတာလား”
“တကယ်လို့ ဒကာကြီးက မိသားစုကို သမာအာဇီဝနည်းနဲ့ ရှာဖွေမကျွေးဘဲ ခိုးဝှက်လုယက်တာမျိုး စတဲ့ ဝိသမလောဘနဲ့ ပိုက်ဆံရှာတယ်ဆိုရင်ကော။ဒကာကြီးက အမြင့်တက်နေတာဖြစ်မလား။အောက်ဆင်းနေတာဖြစ်မလား”
“ဒါဖြင့်၊ ဒကာကြီးအနေနဲ့ အောက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆင်းချင်လား”
“ရဲရဲဝံ့ဝံ့လည်း မဆင်းချင်သလို မရဲတရဲလည်း မဆင်းချင်ကြောင်းပါ ဘုရား”
“အောက်ကို မဆင်းချင်ရင် ကုသိုလ်လုပ်ရမှာလား၊ အကုသိုလ်လုပ်ရမှာလား”
“ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းသင့်လား၊ မကောင်းသင့်ဘူးလား”
“တစ်ခဏ သာယာမှုအပေါ် စည်းစိမ်ယစ်ပြီး တစ်နပ်စားအကြံမျိုး ကြံသင့်လား”
“မဟုတ်မမှန် ပါးစပ်စည်းကမ်းမရှိဘဲ၊ လေ အလကားရတိုင်း တောမကြောက် တောင်မကြောက်နဲ့ ပြောချင်တိုင်း ပြောသင့်လား”
“ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်က အပြစ် ရှိ၊ မရှိ မစဉ်းစား သူများတွေဒုက္ခရောက်တာကို မိန့်မိန့်ကြီးကြည့်ပြီး ကိုယ်လုပ်လို့ရတိုင်း တစ်ဇွတ်ထိုးလုပ်လို့ သင့်တော်ပါ့မလား”
“အဆင်းမရဲဖို့ သတိထားနော် ဒကာကြီး”
“မှန်ပါ့ဘုရား။တပည့်တော် သတိထားပါ့မယ် ဘုရား”
ပေါင်မြို့နယ်တွင် Video ကား တစ်ကား သွားရိုက်စဉ်က ဘန့်ဘွေးကုန်းရွာကျောင်းမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က ဆုံးမစကားဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။သူငယ်ချင်း ဒါရိုက်တာက သူရိုက်ကူးမည့် Video ကားအတွက် ဇာတ်ညွှန်းရေးပေးရန် ပြောသဖြင့် ရေးပေးရင်း နယ်ရိုက်ကွင်းအထိလိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းက ရွာတစ်ရွာတွင် ငါးပါးသီလကို လွန်လွန်ကျူးကျူး ချိုးဖျက်ကာ ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်သူများ နောက်ဆုံးတွင် မိုးကြိုးအပစ်ခံရ၍ ဘဝနိဂုံးချုပ်သွားရပုံကို တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကျင့်သီလ ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင် သတိပေးသော ဇာတ်လမ်းလည်းဖြစ်၊ တည်းခိုသည့်နေရာကလည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဖြစ်နေသဖြင့် ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မရှင်းလင်းသည်များကို ဆရာတော့်ထံ မေးမြန်းလျှောက်ထားရင်း ဆရာတော်နှင့် စကားမကြာခဏပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ထိုမကြာခဏကြားနာခဲ့ရသော တရားများမှ အကုသိုလ်ကို ရဲရဲတင်းတင်း ပြုနေသူများသည် အပါယ်လေးဘုံသို့ ပျော်ပျော်မွေ့မွေ့ ဆင်းနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအပါယ်ဘုံ အောက်လမ်းသို့ အဆင်းမရဲဖို့ အမှာတရားလေးကိုတော့ တစ်သက်တာမမေ့နိုင်အောင် အမှတ်တရ ရှိဖြစ်ပါသည်။
ဆရာတော်၏ သတိပေးတရားနာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အကုသိုလ်တစ်ခုခုကို ပြုမိတိုင်း၊ ပြောမိတိုင်း၊ ကြံစည်မိတိုင်း ‘ငါ အပါယ်လမ်းကို ဆင်းနေပါလား၊ ဆင်းဖို့ကြံနေပါလား’ ဟု မှတ်မှတ်ရရရှိရင်း ဆရာတော့်ကို ကျေးဇူးတင်၍ ကန်တော့မိပါသည်။သတိထားသည့်ကြားမှ မကြာခဏဆိုသလို မှားမိနေသေး၍လည်း ဆရာတော့်ကို တောင်းပန်ဝန်ချ၍ ကန်တော့မိပြန်ပါသည်။
ပုထုဇဉ်လူသားများဖြစ်၍ အမှားကင်းဖို့ရန် မလွယ်ကူလှပါ။သို့သော်လည်း ထိုအမှားသည် သိပ်ကြီးသွား၍တော့ မသင့်လျော်ဟု ထင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ့်ဆန္ဒအရ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနှင့်ကိုယ် အရက်သောက်ပြီး မူးသော်လည်း မှားပါသည်။အပြစ်ရှိပါသည်။မိသားစုမျက်နှာမကြည့်ဘဲ အချိန်ပြည့်မူးနေလျှင် ပို၍မှားပါသည်။ပို၍အပြစ်ရှိပါသည်။အကယ်၍ အရက်မူးပြီး သူတစ်ပါး၏ပစ္စည်း ခိုးဝှက်လုယက်ခြင်း၊ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း၊ သူများသားသမီး ဇနီးမယားတို့ကို ကာမကျူးကျော်ခြင်းတို့ ပြုလျှင်တော့ အမှားကြီးပါပြီ။အပြစ်ကြီးပါပြီ။
တချို့က အကုသိုလ် ဒုစရိုက်မှုကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သာသာယာယာ ကျူးလွန်တတ်ကြ၏။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလွဲ၍ ဘယ်သူ့ဘဝ၊ ဘယ်သူ့အသက်ကိုမှ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နှင့် မတွေးပေးတတ်ကြ။
ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးသော ဇာတ်ပွဲတစ်ခု၏ ပြဇာတ်မှ လူဆိုးလုပ်သူကို သတိရမိပါသည်။သူသည် တောတွင်းဓါးပြဗိုလ်တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ခွန်အားဗလကောင်းသည်။အတိုက်အခိုက် ကျွမ်းကျင်သည်။ဓားပစ်၊ သေနတ်ပစ် လက်ဖြောင့်သည်။လက်မြန်ခြေမြန်ရှိသည်။သို့သော် အလွန်ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သည်။ရွာတွေကို ဓါးပြတိုက်သည်။သူ့ကိုဆန့်ကျင်သည့်သူ၊ သူကြည့်၍မရသည့်သူများကို ချက်ချင်းသတ်ပစ်သည်။မိန်းကလေး ချောချောလှလှ မြင်လျှင်လည်း ငယ်သည်၊ ကြီးသည်၊ ပျိုသည်၊ အိုသည် မရွေးဘဲ အဓမ္မသိမ်းပိုက်သည်။
ထိုမိန်းကလေးများက သူ့ကို အပြုံးနှင့်ဆက်ဆံရသည်။သူ့ကိုချစ်လားဟု မေးလျှင် ချစ်သည်ဟု ပြန်ုပြောရသည်။သူနှင့်နေရတာ ပျော်လားဟုမေးလျှင် ပျော်ပါတယ်ဟု ပြန်ဖြေရသည်။သူက ထိုမိန်းကလေးကို ရိုက်နှက်သည့်အခါတွင်လည်း သူက နာလားဟုမေးလျှင် မနာပါဘူးဟု ပြန်ဖြေရသည်။
သူ့ကို ဆက်ကြေးပေးနေရသော ရွာသူ၊ ရွာသားများဆိုလျှင် သူ့ကို နာကျည်းမုန်းတီးလွန်း၍ သူ့ကွယ်ရာတွင် တိရစ္ဆာန်နှင့်နှိုင်းကာ ဆဲရေးတိုင်းထွာကြ၏။မကြားဝံ့မနာသာ စကားလုံးများနှင့် ကျိန်ဆဲကြ၏။သို့သော် သူနှင့်တွေ့သောအခါတွင်မူ တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်ရဲကြရှာပေ။ရွာသူ၊ ရွာသားများကို အခြားရွာမှ သူခိုး ဓားပြများ လာရောက်မနှိပ်စက်ရအောင် သူက ကာကွယ်ပေးနေတာကို သိတယ်မဟုတ်လားဟုမေးလျှင် သိပါတယ်ဟု ဖြေရသည်။သူ့ကို ကျေးဇူးတင်လားဟုမေးလျှင် တင်ပါတယ်ဟု အမြန်ဆုံးပြန်ဖြေရသည်။သူ့အလိုကို ဆန့်ကျင်ဖြေရန် မဆိုထားနှင့် သူ့အလိုကျအတိုင်း ထောက်ခံဖြေပေးနေသည်က တုန့်တုန့်ဆိုင်းဆိုင်း ဖြစ်နေလျှင် သို့မဟုတ် တုန့်တုန့်ဆိုင်းဆိုင်း ဖြစ်နေသည်ဟု သူယူဆလျှင် ချက်ချင်း သေနတ်နှင့် ပစ်သတ်သည်။လူထုပိုင်သော ရွှေ၊ ငွေ၊ ပစ္စည်းများကို အဓမ္မယူရာ၌ သူ့အိတ်ကပ်ထဲမှ ပိုက်ဆံကို အလွယ်တကူ နှိုက်ယူသလို သဘောထား၏။လူသတ်သည့် နေရာတွင်လည်း ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်ကို လက်နှင့်ဖိသတ်တာထက်ပင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လွယ်လွယ်ကူကူ ကျူးလွန်နိုင်စွမ်းရှိလှ၏။
သူ့လက်အောက်ငယ်သားများကိုလည်း သူ့ကို ပြန်မလှန်နိုင်အောင် လုပ်ထားသည်။သူ့သြဇာအာဏာ တည်မြဲနိုင်ရန်အတွက် လက်အောက်ငယ်သားများကို ပင်ပင်ပန်းပန်း လေ့ကျင့်စေသည်။သူအလိုမကျသူကို ရက်ရက်စက်စက် အပြစ်ပေးသည်။လက်ညှိုးဖြတ်တာမျိုး၊ အချင်းချင်းပြန်သတ်ခိုင်းတာမျိုး လုပ်သည်။သူ့ငယ်သားအားလုံးက သူ့ကို လုံးဝမော့မကြည့်ရဲကြပေ။
ထိုလူဆိုးလုပ်သည့်သူက သရုပ်ဆောင်ကောင်းလွန်းတော့ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်များက သူ့ကို ဆီးစေ့များ၊ ပြောင်းဖူးရိုးများနှင့် ပစ်ပေါက်ကြပါသည်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လက်ထဲ၌ အဆင်သင့်ရှိနေသော စားပင်မစားရသေးသော အပေါ်အဖတ်များပင် မခွာရသေးသော ပြောင်းဖူးအကောင်းကြီးကို မနှမြောနိုင်ဘဲ ပစ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ ဖြစ်သော်လည်း ထိုသူနှိပ်စက်ပုံများကို ယနေ့တိုင် မြင်ယောင်ပါသေးသည်။
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်၍ တခြားသူတွေအပေါ် လောဘတကြီး၊ ဒေါသတကြီး ပြုမူဆက်ဆံသူများကိုမြင်တိုင်း ထိုလူဆိုးကို မြင်မိပါသည်။ထိုလူဆိုးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိပါသည်။
တချို့လူများသည် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မထားဘဲ ငွေအင်အား၊ လူအင်အား၊ လက်နက်အင်အား၊ အာဏာအင်အားတို့ကို အရင်းအနှီးပြု၍ ဝိသမလောဘကို ဦးစားပေးကာ တခြားသူများ၏ ဘဝတွေကို စိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်ကြသည်။သူတို့ကတော့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွား ပီတိတွေခံစားပြီး အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေကြလေသည်။ကလေးငယ်လေးတွေက ငါးသေးသေးလေးတွေ၊ ဖားသေးသေးလေးတွေလို အကောင်ငယ်လေးများကို ဆော့ကစားရင်း ပျော်နေကြသလိုမျိုး ကျေနပ်နေကြသည်။သူတို့၏ အောက်တန်းကျသော စိတ်ဓာတ်များကို ပြုပြင်ရကောင်းမှန်းမသိဘဲ သူတို့နှင့်နီးစပ်ရာ သူတို့သားသမီး သူတို့အမျိုး၊ သူတို့တပည့်များကိုပင် မကောင်းသော အမွေအနှစ်များ လက်ဆင့်ကမ်း ပေးလိုက်ကြသေးသည်။သူတို့ကိုယ်သူတို့ အပေါ်စီးရောက်နေပြီ၊ သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ပြီဟု အထင်ရောက်နေတတ်၏။
တကယ်တော့ သူတို့တွေသည် လူများ၏ အထင်သေးခံနေရပြီး သေရင် အပါယ်သွားရမှာပါလားဟု မတွေးမိကြ။ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ်၊ ကိုယ့်လောဘနှင့်ကိုယ် အောက်သို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆင်းနေတာပါလားဟု သဘောမပေါက်ကြပေ။သူတို့တစ်ကိုယ်လုံးမှာ တောက်လောင်နေသည့် ရာဂမီးသည် အဝီစိမှာရှိသော ငရဲမီးထက်ပင် ပို၍ပူပြင်းနေဟန်ရှိပါသည်။ကိုယ်ချင်းစာ အကြင်နာစမ်းရေကတော့ သူတို့နှလုံးသားမှာ တစ်စက်တစ်ပေါက်မျှပင် ရှိဟန်မတူပါ။ထို့ကြောင့်လည်း ငရဲမကြောက် ပြာပူမကြောက် ရဲရဲတောက် လူမိုက်ကြီးတွေ လုပ်နေတာဖြစ်မှာပါ။သူတို့ ဦးနှောက်ထဲမှာ တရားခြင်း၊ မတရားခြင်းကို ဆင်ခြင်နိုင်ရန် အသိလည်းမရှိတော့ပါ။သတိလည်းမရှိတော့ပါ။
ပုပ်ပွနေသော လူသေကောင်၊ တိရစ္ဆာန်အသေကောင်တွေကို မက်မက်မောမော စားသောက်လိုက်၊ အချင်းချင်း စားမာန်ခုတ်လိုက်နှင့် ပွဲတော်ကြီးကျင်းပနေသော လောက်ကောင်များ၊ ကျီးကန်းများ၊ ဠင်းတများကို နမူနာအဖြစ်ကြည့်ပါ။ဘေးကကြည့်နေသောသူများအတွက် အော့နှလုံးနာစရာ မြင်ကွင်းပါ။အောက်တန်းကျသော အစားအသောက်များကို အာဟာရပြုနေကြတာပါ။သို့သော်လည်း သူတို့အတွက်ကတော့ နတ်သုဒ္ဓါဟု ထင်မှတ်မှားနေကြတာပါ။
အကုသိုလ် မကြောက်သော လူတစ်စုသည်လည်း မိမိတို့၏ မတော်လောဘနှင့် ဖန်တီးထားသော စည်းစိမ်နှင့် အာဏာအပေါ် သာယာနေပြီး အမှန်တရားကို စိန်ခေါ်ရင်း၊ လူကောင်းတွေကို ဒုက္ခပေးရင်း မကောင်းမှုနွံထဲသို့ နက်သည်ထက်နက်အောင် ဆင်းနေကြရှာသည်။ထိုသူတို့သည် မိမိပြုသမျှတို့သည် တရားသဖြင့်လား၊ မတရားသဖြင့်လား မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုးထွင်းမသိ၊ ဘေးမှထောက်ပြလည်းမသိ၊ ဘုရား တရားတော်တွေ ဖတ်နေ နာနေလျက်နဲ့လည်းမသိနှင့် အတော်လေးကို အံ့သြစရာကောင်းနေသည်။
သိသလိုလိုရှိသောသူ ကျပြန်တော့ ပိုင်ဆိုင်ထားသောပစ္စည်းကို လက်လွှတ်ရမှာစိုးသည်။အရှိန်ကောင်းကောင်းရနေသော ဝင်ငွေတွေ ရပ်တန့်မှာစိုးသည်။သည်တော့ ပိုင်ဆိုင်ထားသောပစ္စည်းကို ဘာလို့လက်လွှတ်ရမှာလဲ၊ အရှိန်ကောင်းနေတဲ့ ဝင်ငွေကို ဘာလို့ဆက်မရှာရမှာလဲဟု မာန်တက်လာသည်။“သိက္ခာအကျတော့ မခံဘူး သူများအပေါ် ဒုက္ခပေးထားတဲ့ အကြွေးတွေကို နောက်ဘဝမှပဲ ဆပ်တော့မယ်။တရားသည်ဖြစ်စေ၊ မတရားသည်ဖြစ်စေ ငါရှာထားတဲ့ပိုက်ဆံ ငါ့ပိုက်ဆံပဲ။ငါဖန်တီးထားတဲ့အာဏာ ငါ့အာဏာပဲ။ဘယ်သူဘာပြောပြော လုံးဝနောက်မဆုတ်ဘူး” ဟု လောဘ ၏အပေါ် မာနက ထပ်ဆင့်မိကြပြန်သည်။မကောင်းမှုအပေါ် သာယာပြီး အမှားကို ပြန်မပြင်သည့် မြွေတစ်ကောင်၏ မာနကို ငါးရာ့ငါးဆယ်လာ ဝိသဝန္တဇာတ်တွင် တွေ့ရပါသည်။
ထိုဇာတ်တွင် ဘုရားလောင်းသည် အဆိပ်ကိုဖြေစေတတ်သော ဆေးဆရာဖြစ်၏။တစ်ခုသောရွာမှာ လူတစ်ယောက် မြွေကိုက်ခံရ၍ မေ့မျောနေရှာ၏။ဆေးဆရာကိုပင့်၍ လိုက်သွားပြီး ကုသသောအခါ ကိုက်သွားသော မြွေကိုယ်တိုင် အဆိပ်ကိုပြန်စုပ်ယူနိုင်ပါက ချက်ချင်းသက်သာနိုင်သည်ကို ဆေးဆရာက သိ၏။ထိုမြွေသည်လည်း ဝေးဝေးမရောက်နိုင်သေးကြောင်း စဉ်းစားမိသည်။ထို့ကြောင့် မြွေကိုလိုက်ရှာသောအခါ သူထင်သည့်အတိုင်းပင် အနီးအနား၌ တွေ့ရသဖြင့် ဖမ်းပြီး မြွေဆိပ်သင့်နေသော လူနာထံသို့ ယူလာကာ၊ ၎င်း၏အဆိပ်များကို ပြန်လည်စုပ်ယူစေသည်။သို့သော် ထိုမြွေက၊ အဆိပ်များကို လုံးဝမစုပ်ယူပေ။ဆေးဆရာက မည်သို့ပြောပြော၊ ၎င်းက လုံးဝအလျှော့မပေးပါ။နောက်ဆုံးတွင်၊ ဆေးဆရာက ၎င်းကို မီးဖြင့်တိုက်မည်ဟုပြောကာ တကယ်ပင် မီးရှို့မည့်ဟန်နှင့် မီးဖို ဖို၏။ဘယ်လိုခြောက်ခြောက်၊ ဘယ်လိုချော့ချော့ ထိုမြွေက လုံးဝမတုန်လှုပ်ပါ။သူများအသက်တွေ၊ ဘဝတွေ ပျက်စီးတာ မပျက်စီးတာကို သူလုံးဝမစဉ်းစားပေးနိုင်ကြောင်း၊ သူ့အသက်သေချင် သေပါစေ၊ သိက္ခာအကျခံပြီး အဆိပ်ပြန်စုပ်ယူပေးဖို့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းကိုသာ ပြန်ပြောလေ၏။
ဘုရားလောင်း ဆေးဆရာက ၎င်းမြွေကို တကယ်မသတ်ခဲ့ပါ။သို့သော်လည်း မသိမှု၏ ဆိုးဝါးပုံ၊ ကြောက်စရာကောင်းပုံကိုတော့ တရားရလိုက်ပါသည်။
တချို့တချို့သော လူမိုက်များသည် မိမိတို့၏မာနကို မချိုးနှိမ်ဘဲ၊ မိမိတို့၏သိက္ခာကို မချဘဲ မိုက်လက်စနှင့် ဆက်မိုက်ကြသည်။မိမိ၏ တစ်ခဏစံ ဘဝအတွက် အကုသိုလ် တွင်းနက်နက်ကို ကိုယ်တိုင်တူးကာ ဆက်၍ဆင်းနေကြလေသည်။
လောကမှာ အဆုံးထိ မတွန့်မဆုတ်ဘဲ အခြားသူများ၏ ဘဝတွေကို ဖျက်ဆီးသည့်သူမျိုးက လူနည်းစုသာရှိပါသည်။ထိုလူနည်းစုသည် သာမန်မိသားစုမှာဆိုလျှင် သူတို့မိသားစုပဲ ဒုက္ခရောက်မှာပါ။အကယ်၍များ ထိုလူနည်းစုသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်သော ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ခဲ့လျှင်တော့ နိုင်ငံသားအားလုံး ခံစားရမည့် ဒုက္ခစက်ဝန်းက တွေးရဲစရာပင်မရှိပါ။သံသရာမှာ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် ထိုခေါင်းဆောင်ဆိုးများ၏ ကံကြမ္မာကလည်း အဆုံးမရှိအောင် ဆိုးဝါးမှာ သေချာပါသည်။
ထိုသို့ ဂိတ်ဆုံးအောင် ဆိုးသူများလည်း ဂိတ်မဆုံးသေးသဖြင့် ပြင်ဆင်ရန် အချိန်ရှိပါသေးသည်။ထို့ကြောင့် ဒုက္ခပေးသူတွေရော၊ ဒုက္ခအပေးခံရသူတွေပါ၊ အားလုံး အားလုံး ကိုယ်တိုင်လည်း အကုသိုလ်မဖြစ်၊ တခြားသူတွေလည်း ဒုက္ခမများရအောင်......။
Just don’t dare to get down. အဆင်းမရဲကြနဲ့နော်။
စက်တင်ဘာ - ၎